Loza vita amin'ny Voahangy
tamin'ny admin tamin'ny 2021-10-09
Ny perla barika dia manondro ireo perla misy endrika tsy ara-dalàna. Avy amin'ny Portiogey ny Baroque. Midika izany fa perla tsy boribory, ary voalohany dia manondro perla manana endrika hafahafa. Taty aoriana dia nivoatra ho lasa fomba kanto, nanaraka endrika tsy ara-dalàna. Ny fomba Baroque ...
Nataonao tsara tamin'ny fararano sy ririnina ve izany?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-08-30
Ny haizina dia miteraka hazavana, ny fijaliana dia mampitombo ny harena. Ny vehivavy mitafy rojo perla dia hamiratra, marina izany. Ny rojo perla lava mando no vokatra tokana mety indrindra hanatsarana ny toetrany, indrindra amin'ny fararano sy ririnina mainty, fotsy sy fotsy. Ny rojo perla lava mando ...
Soul Mate an'ny vehivavy
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-07-29
Tsy maninona na bankirompitra ianao ary tsy afaka miakanjo akanjo be. Ny fanaovana an'io rojo voahangy io dia afaka mampatsiahy ny tenanao fa olo-malaza taloha… ”hoy i Caroline —— Movie <2 Broke Girls>" Innocence and mellowness "," fahalemem-panahy sy faharetana ", & ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-07-14
Ny perla koa dia manana loko maro loko. Na dia mbola tsy namarana tanteraka ny antony mahatonga ny fandokoana loko amin'ny perla miloko aza ny olona, ​​dia azo tsoahina amin'ny loko perla fa ny lokon'ny perla dia manana fifandraisana lehibe amin'ny renin'ny perla izay miteraka t ...
tamin'ny admin tamin'ny 2021-07-03
Ny perla volamena lazaintsika matetika dia manondro ny Voahangy amin'ny Ranomasina atsimo, izay karazana voahangy an-dranomasina teraka any amin'ny ranomasina avaratry Australia, Filipina, Malaysia ary ny vondronosy Indonezia. Noho ny lokony volamena, dia nantsoina hoe Voahangy Gold Sea South, antsoina koa hoe South Sea Pe ...
Nisy vaovao iray navoaka momba ny tranga ahiana ho voahangy perla tao amin'ny foibem-panadinana firavaka: nandany vola mitentina USD1 50000 Andriamatoa Chou hividianana rojo voahangy iray rano ho an'ny vadiny, saingy vao vita ny fahavaratra iray, ilay rojo perla izay matetika no ampiasain'ny vadiny. nihena 1.5mm teo ho eo, ...
Nifidy kavina tsara ianao?
tamin'ny admin tamin'ny 2021-06-16
“Mangina ny firavaka, fa manohina ny fon'ny vehivavy tsara lavitra noho ny fiteny rehetra.” - Shakespeare Rehefa mihaona firavaka mahafinaritra ny vehivavy mahafinaritra, dia misy fiatraikany eo amin'izy roa. Ny vehivavy dia en ...
Pesona an'ny perla
tamin'ny admin tamin'ny 2021-06-03
“Ny rojo tsara indrindra, ny kojakoja mety indrindra amin'ireo firavaka rehetra eran'izao tontolo izao, ary ny kojakoja ilaina amin'ny akanjo fitafiana rehetra an'ny vehivavy - perla iray. Ny vehivavy tsirairay dia tokony hanana rojo rojo voahangy ”——Geneviève Antoine Dariaux Angamba efa manana dazzl ianao ...
Ny vokatry ny voahangy anatiny
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-05-21
Na dia tsy manana ny famirapiratry ny diamondra sy ny hatsaran-tarehy misy vatosoa miloko aza ny perila, ny lokony malefaka sy malefaka ary ny endrika voajanahary sy tsara tarehy dia nanjary toerana mahafinaritra indrindra. Ny perla rehetra dia harena feno tanjaka. Mistery tsy fantatra mialoha ...
tamin'ny admin tamin'ny 2021-04-01
Amin'ny fiainantsika andavan'andro dia afaka misafidy ny kavina perla lava aloha isika, io no fitaovam-piadiana tsara indrindra hanovana ny endrika endrika, na kanto na miavaka, azo lazaina ho entana tena ilaina izy io. Ny kavina lava dia tsotra sy malala-tanana amin'ny fomba, ary azo ampifanarahana amin'ny fomba mahazatra, izay mety ...
Ny toerana tsara indrindra hividianana firavaka amin'ny Internet: kavina, peratra ary maro hafa
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-03-25
Izao ny zavatra: tiako ny kiraro sy kitapo toy ny zazavavy manaraka, saingy manana toerana manokana ato am-poko aho mba hanao firavaka. Raha ny marina dia variana amin'ny fanangonana kely ahy aho. Na izany aza, mitady akanjo vaovao sy mamirapiratra foana koa aho- Soa ihany fa nanangona toerana tsara indrindra hividianana firavaka ...
Cross-sea: ny fivoarana farany momba ny toerana misy perla-Business Business Cross-sea: ny fivoarana farany momba ny toerana momba ny perla
Ny perla dia nankafizin'ny olona ary nankamamin'ny olona hatramin'ny taloha. Tena nankasitrahana tokoa izy ireo tany Gresy sy Roma taloha, ary nanomboka teo dia fantatra eran'izao tontolo izao ho zavatra haingo sy sarobidy. Ireo haingo ireo dia avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Mbola misy perla voajanahary ...
Aaa Voahangy Rano, Voahangy fotsy mangatsiaka fotsy, Kavina Stud Perla, Fanomezana Bridesmaid Voahangy Rano, Vokatra Voahangy, Fehiloha Voahangy Volafotsy Sterling,
NO.18 Làlana atsimo Ji Shanghai, Nansha JinGang, Zhangjiagang Jiangsu, Sina